Allaha u naxariistee waxaa goor dhaw Gaalkacyo lagu dilay guddoomiyihii xaafada Horumar Muuse Aadan. – Radio Daljir
Allaha u naxariistee waxaa goor dhaw Gaalkacyo lagu dilay guddoomiyihii xaafada Horumar Muuse Aadan.
Nofeembar 22, 2011 12:00 b 0
Gaalkacyo, Nov, 22 ? Waxaa maantay magaalada Gaalkacyo lagu dilay Allaha u naxariistee guddoomiyihii xaafada Hormar Muuse Aada, xilli uu ku sugnaa xafiiskiisa.
Warar is-khilaafsan ayaa illaa iminka ka soo baxaya habka uu u dhacay dilka loo gaystay marxuun Muuse Aadan, waxaana loo badinayaa in dablay hubaysan ay rasaas kula beegsadeen xafiiskiisa xilli uu ku guda-jira hawlo shaqo oo la xiriira hormarinta xaafada.
Warar ay Radio Daljir ka helayso dad goob-joogayaal ah ayaa ku waramaya in xilligii dilku uu dhacay kaddib, ay goobtaasi soo gaareen ciidamo madani ah iyo ciidan ka socda kuwa ammaanka gobolka, balse ay ku guul-daraysteen inay gacanta ku soo dhigaan dhagar-qabayaashii ka dambaysay dilkaasi.
18-kii Novembar, ayay ahayd markii majid lagu magacaabo Dul-qarnayn lagu dilay xilli uu salaad maqrib kasoo baxay sargaal u shaqaynayay hay?adda Norwegian Refugee Council ?NRC? oo lagu magacaabi jiray Axmed Jamac Cawad.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sxb dhaw la noqotay dilalka qorshaysan iyo waxyeelada dadka birimagaydada ah, waxaana dawladda Puntland ay ku fashilantay inay sugto ammaanka magaalada Gaalkacyo.
Baahin: Arbaca, Nov 23, Weriye Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. Puntland oo ku eedaysay Galmudug khalkhal gelin amniga Galkacyo; “Hawlaha madaarku caadi ayay u socdaan, wax hakad ahina kuma imaan” Maareeyaha madaarka Galkacyo; R/wasaare Gaas oo beeniyey in dawlada federaalku ay ciidan u qorato dhallaanka.
Baahin: Isniin, Nov 21, Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Galkacyo. Madaafiic lagu tuuray madaarka Galkacyo; Puntland oo Galmudug ku eedaysay fal-dambiyeedka; Galmudug oo iska fogaysay eedda, sheegtayse in ay xaq ku leeyihiin madaarka; M/weyne Shariif oo sheegay in dawladiisu ay kaalin ka qaadan doonto dib u noolaynta fanka & fannaanka; Guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka oo sharci darro lagu tilmaamay Guddi uu R/wasaare Gaas u magacaabay hirgelinta barnaamijka tubta nabadda.